Nzira yekuchengetedza sei brake system yeako wega kurodha kongiri musanganiswa?
Yekuchengetedza mirairo yeakavhuna system yekuzvidzora kurongedza konkrete musanganiswa: Wese mutyairi wekuzvitakura wega kongiri musanganisi akasangana nemamiriro ekugutsurira kana achityaira. Izvo zvinonzi kugutsurira ndekwekuti bhureki rakanyanya kusimba, zvichikonzera kushanduka kamwe kamwe kwevhiri Stop, muviri uri pasi pe ...
Ndeupi rudzi rwega wekuzvitakudza kongiri chisanganiso chiri nani?
Kune vakawanda uye vanogadzira vega vega kurodha kongiri musanganiswa, uye chigadzirwa chakasiyana chakaoma, izvo zvinounza matambudziko kune vashandisi kuti vatenge; 1. Kuti tinzwisise mashandiro eparamende eako ega kurodha kongiri musanganisi, semuenzaniso, tinogona kuona kuti tinosarudza rudzii rweinjini, yakawanda sei ...
Kuchengetedzwa kwekuchera kweaya matanhatu hakugone!
1. Iko kumanikidza kwetaya kwakanyanya Mukuita kwekushandisa excavator, kugadzirisa tire kunokosha kwazvo. Kazhinji kutaura, kumanikidzwa kwetaya kunogona kugadziridzwa zvinoenderana neyakajairika kumanikidza mumatsutso uye munguva yechando kana tembiricha yacho yakakodzera. Nekudaro, kumanikidza kwakazara hakusi ...
Ko zvakadii nezve chiitiko che "nodding" mu hydraulic cylinder ye excavator?
Kuongorora maitiro e hydraulic cylinder achigutsurira mupombi. 1. Kana hydraulic cylinder ye excavator boom “nods” kana uchisimudza, sarudza yakajairwa hydraulic cylinder (senge bhakiti cylinder) kutsiva pombi yemafuta uye mapombi ekudzosa eiyi mairi. Panguva ino, shandisa iyo buc ...
Chii chinofanirwa kutariswa kune kana vhiri rinotakura injini richishanda?
1. Mushure mekunge injini yevhiri rinotakura yatanga, yakagadzirira kutanga kana bhureki rekumanikidza rasvika padanho rekuchengetedza, kuitira kuve nechokwadi chekuchengetedza mabhureki panguva yekutyaira. Iyo yakaoma Kana paitika emergency braking, tinya bhatani re emergency uye yekupaka brake vharafu (bhatani rinogona chete ...
Chii chinofanirwa kutarisa backhoe loader kana uchichenesa?
Backhoe loader inonyanya kushandiswa munzvimbo dzekuvaka. Kune yedu indasitiri yekuvaka yemazuva ano, ibasa ranguwo kuva nemidziyo yekuvakira isingadhuri Izvo zvatiri kushuvira kuvandudza backhoe loader uye pfupi bhodhi mukushandisa kwakazotevera, pamwe nekushandisa kwedu kwekupedzisira Matambudziko ayo backhoe l .. .
Chii chatinofanira kutarisisa kwatinoshandisa marori eforklift?
Nyaya dzinoda kutariswa kana uchishandisa marori eforklift anosanganisira: 1. Mukushandisa kwemarori eforklift, kutarisisa kwakakosha kunofanirwa kubhadharwa kubhadharisa panguva yakakodzera kwebhatiri uye nekuchengetedza chaiko kwebhatiri. Teerera kune iyo nzira kana uchichaja iyo yekuchengetera bhatiri Zvizere kuchaji pasina ov ...
Chii chinofanirwa kutariswa kune 4 Wheel Drive Forklift Rori injini?
4 vhiri rekutyaira forklift rori inogona kutibatsira kugadzirisa akawanda matambudziko ekufambisa, kunyanya kune mamwe akati kurei simende matombo, kongiri, nezvimwewo, izvo zvinogona kutakurwa zvakananga ne4 vhiri dhiraivha forklift rori. 4 vhiri rekutyaira forklift rori inowanzo shandiswa mukuvaka saiti kuvaka uye r ...
Maitiro ekuderedza zvisina basa simba rekushandisa panguva yekuchera
Kutanga, deredza kurasikirwa kwesimba zvisina basa. 1. Iko kushandiswa chaiko uye kudzivirirwa kweanopedza pombi uye mafuru, kusanganisira kazhinji kubviswa kwecoke kubva mune isina kugadzikana, kugadziriswa panguva yakafanira kweakakanganiswa mafuru, hapana chikonzero chekuisa yekuzadza mapaipi kumberi, hapana kudikanwa kwekuzvigadzirira kwakaperera uye marefu ekuzora mapaipi, nezvimwe. 2.Ke ...
Tekinoroji ndicho chigadzirwa chekutanga, uyu musanganiswa wekongiri unonyatso kuzviita
Iko kumhanya kweChinese engineering kwakakurumbira kwazvo pasirese, uye epamberi mainjiniya michini inoita basa rakakosha. WIK rori musanganisi anoshandura zvachose kugadzirwa kwekongiri. Iyo inoshanda uye yakangwara maitiro inoita kuti kugadzirwa kuve nyore uye nyore. Kudya, kuyerwa uye kusanganisa Jekiseni remvura kunogona b ...
Nei iyi Yega Yekuregedza Konkrete Masanganisi yakakurumbira
Kuvhurwa kweConcrete Mixing Machines kwavhura nzira nyowani yekushandisa kongiri yezvirongwa zvidiki nepakati, izvo zvine mari uye zviri nyore, uye mapurojekiti mazhinji madiki nepakati akavatengera muchirongwa. Pakati pevazhinji vanozvitakudza matiraki emota, ichi chisanganiso rori v ...
Vashandi vanoita sei mashandiro eSelf Loading Concrete Mixers_Iyo Yega Inoteedzera Konkrete Masanganiswa yakasanganiswa sei?
1. Mushure mekuburitsa panzvimbo yekuvaka, chirumidza kuburitsa hopper yekudyisa, kuburitsa hopper, uye kuburitsa chute neipi rinouya netiraki yekusanganisa kubvisa sludge nekongiri inonamira mumuviri. Kudzoka Panzira yekudzokera kunzvimbo yekusanganisa, 150-2200L yemvura inofanira kunge iri ...
Excavator Crawler, Kuzvichengeta Kwako Konkrete Musanganiswa, Mini Wheel Loader, Bhakiti Wheel Loader, Wheel Loader, Lw300kn Wheel Loader,